The Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောမှုအတွက်လမ်းညွှန် - Breeds
သြစတြေးလျသိုးထိန်းနှင့် Border Collie ကိုဖြတ်ကူးခြင်းသည်အလွန်အသိဉာဏ်ရှိပြီးတက်ကြွသောပေါင်းစပ်မှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှော။
မိဘနှစ် ဦး စလုံးမူလကခဲ့ကြသည် အလုပ်လုပ်ခွေးအဖြစ်ရပ်ကြီး (နွားများနှင့်သိုးများ) နှင့်၎င်းတို့၏နာခံမှုများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။
Border Collie သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည် အသိဉာဏ်အရှိဆုံးခွေးဖောက် ဒါကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပေါင်းစပ်မှုဟာအလွန်လိမ္မာပါးနပ်ပြီးလျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်ခြင်းဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့သည်မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုအဆင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်နေရာအကန့်အသတ်ရှိသောအိမ်များနှင့်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်ဤလုံ့လ ရှိ၍ သစ္စာရှိသောပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင့်အိမ်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်နိုင်သည်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ 'Border-Aussie' ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်၊ သူတို့ပျော်ရွှင်ပြီးကျန်းမာနေဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။
Border Collie Australianစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Border Collie Australian Shepherd ရောခွေးကြီးများ
Border Collie Australianစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောခြင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောအရွယ်အစားနှင့်အသွင်အပြင်
Border Aussie ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်
တစ် ဦး ကနွားထိန်းခွေးလေ့ကျင့်
The Border Collie Australian Shepherd ရောစပ်မှုသည်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များကိုမွေးမြူရန်ဖြစ်သည်။
The Border Collie Australian Shepherd ရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည် တစ်စပ် sheepdog မွေးမြူရေးခြံများနှင့်မွေးမြူရေးခြံများတွင်မွေးမြူရေးအတွက်မွေးမြူရေးအတွက်မွေးမြူထားသည့်မိဘနှစ်မျိုးစလုံးကိုမွေးမြူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
The Border Aussie သည်သစ္စာရှိပြီးနာခံမှုရှိပြီးအမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်နေသည်။
အဖော်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်ပင်သူတို့ကိုပတ် ၀ န်းကျင်ကွင်းကွင်းများတွင်ပြေး။ သူတို့၏မိသားစုကိုထိန်းကျောင်းရန်ကြိုးစားခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ကြမ်းပြင်သို့မချမီ ။
Border Collies ၏မျိုးရိုးအများစုကို ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော Old Hemp ဟုခေါ်သောလုံးခွေးတစ်ကောင်နှင့်ပြန်တွေ့နိုင်သည်။
Hemp Old သည်အလွန်ထိရောက်သောသိုးထိန်းကောင်ဖြစ်သဖြင့်သူ၏ခွေးပေါက်စများအားဝယ်လိုအားများလွန်း။ သူ၏အသိဉာဏ်နှင့်နာခံမှုရှိသောစရိုက်များကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။
ရလဒ်အနေနှင့် Old Hemp သည်မျိုးဆက် ၂၀၀ ခန့်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အမေရိကန်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့သောဤမျိုးဆက်၏လူကြိုက်များမှုအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
The သြစတြေးလျသိုးထိန်း၏သမိုင်း အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနည်းငယ်ပိုပြီးစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကမှာအားလုံးသြစတြေးလျမဟုတ်! ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်ဖောက်ခွဲမှုကိုအမေရိကအနောက်ပိုင်း၌အမှန်တကယ်တီထွင်ခဲ့သည်။
အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့အကြားကုန်းတွင်းဒေသမှဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်သြစတြေးလျသို့၊ နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသော Basque Basque Shepherds တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
The Border Collie Australian Shepherd Mix ကိုအောက်ပါ Kennel ကလပ်များကအသိအမှတ်ပြုသည်။
အမေရိက၏ခွေး Registry, Inc
နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်နာ Canine မှတ်ပုံတင်
တစ် ဦး Crossbreed ဖြစ်ခြင်းလည်းအမြဲရှိမဆိုလိုသည် သူတို့ရဲ့ purebred counterparts တွေကိုအဖြစ်နှစ်လိုဖွယ် ။
Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောအချက်အလက်
အရွယ်အစား ၁၉-၂၃ လက်မ (အထီး) နှင့် ၁၈-၂၁ လက်မ (အမျိုးသမီး)
အလေးချိန် 35-65 ပေါင် (အထီး) 30-50 ပေါင် (အမျိုးသမီး)
သက်တမ်း 10-17 နှစ်
အသင့်တော်ဆုံး တိရိစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းရန်ခွေး၊ စွမ်းရည်မြင့် / Flyball နည်းပြများ၊ တက်ကြွသောမိသားစုများလိုအပ်သောလယ်သမားများ
အရောင်အမျိုးမျိုး အနက်ရောင် / အဖြူရောင်၊ အနီရောင်၊ အနီရောင် Merle၊ အပြာရောင်မာရီ၊
အပူချိန် စွမ်းအင်ပြည့်ဝသော၊ အသိဉာဏ်ရှိသော၊ တည်ကြည်သော၊
Border Collies အတွက်ပျမ်းမျှအမှိုက်သရိုက်များသည်အရွယ်အစားရှိသောခွေးပေါက်လေးကောင်မှ ၈ ကောင်အထိရှိပြီးသြစတြေးလျသိုးထိန်းများအတွက်အမှိုက်ပုံး၏အရွယ်အစားဖြစ်နိုင်သည် ပိုကြီးဖြစ်လေ့ရှိတယ် ;6မှ9ခွေးပေါက်စ။
ရလဒ်အနေနဲ့မခွဲခြားဘဲ၏ သောဖောက် sire သို့မဟုတ်ဆည်ဖြစ်ပါတယ် , အမှိုက်သရိုက်များ4နှင့်9ခွေးကလေးအကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်။
Border Collie Australian Shepherd Mix ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျမည် ခုနစ်ပတ်မှရှစ်ပတ်အကြာတွင်သူတို့အိမ်အသစ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့လုပ်လိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအရွယ်အစားရောက်ရှိဖို့ အသက်အရွယ်ပတ်ပတ်လည် 12-15 လမှာ။
သို့သော် Border Collie နှင့်Sheစတြေးလျသိုးထိန်းတို့၏ပျမ်းမျှအလေးချိန်ကိုကြည့်လျှင်အောက်ပါကြီးထွားမှုဇယားတွင်အလေးများကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
၈ ပတ် 5-9 5-9
3 လ ၁၁-၂၁ ၁၂-၂၆
6 လ ၂၀-၃၉ ၂၃-၄၉
၉ လ 25-50 ၂၈-၆၅
၁၂ လ ၂၈-၄၃ 30-67
Border Collie Australian Shepherd ရောကယ်ဆယ်ရေး
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ US ရှိကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝကိုထူးကဲစွာဖြည့်စွက်နိုင်မည့် Border Aussie ပါဝင်နိုင်သည်။
တစ် ဦး ကြက်တူရွေး၏စိတ်ထားဆွေးနွေးတဲ့အခါ, အဲဒါကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ် ခွေးတစ်ကောင်စီသည်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်သည် မိဘမွေးမြူသူတစ် ဦး စီ၏အရည်အသွေးကောင်းများနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုပေါင်းစပ်။ အမွေဆက်ခံနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ် ဦး စလုံးမိဘများ၏စိတ်ထားအလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေမျှော်လင့်သူတို့ရဲ့ Border Collie သြစတြေးလျသိုးထိန်းရောနှောရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းတစ် ဦး ခန့်မှန်းခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
အလားအလာရှိသောပိုင်ရှင်များမျှော်လင့်သင့်သည် မြင့်မားသောအသိဉာဏ်ရှိသောခွေးတစ်ကောင် သူ၏ ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်လှုံ့ဆော်ခံရသောသူ။
Border Collie x သြစတြေးလျသိုးထိန်းအရောအနှောများ၊ ကောင်းသော socialized နေသောသူ , ကောင်းမွန်စွာကစားရန်နှင့်ကလေးများပင်ပန်းဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်, အကြီးနှင့်အငယ်ကလေးများနှင့်အတူမိသားစုများမှအံ့သြဖွယ်ဖြည့်စွက်ပါ!
အဖော်ခွေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ဤထိန်းကျောင်းသောအရောအနှောများသည်များသောအားဖြင့်အခြားလူနှင့်ခွေးများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီးကစားတတ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဟောင်းနွမ်းသည်တိုင်အောင်သူတို့ကိုထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့်လိုက်ရှာ။
Working Border Collie Australian Shepherd Mixes သည်မသိသောခွေးများနှင့်ဆက်ဆံရန်တွန့်ဆုတ်နေသဖြင့်ထူးဆန်းသောခွေးတစ်ကောင်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းအလုပ်လုပ်သည့်ခွေးနှင့်မိတ်ဆက်သောအခါဂရုပြုသင့်သည်။
သင့်လျော်သောထိတွေ့မှုနှင့်ထိရောက်သောအစောပိုင်းလေ့ကျင့်မှု (သူတို့၏မွေးမြူရေးပင်ကိုအသိကိုလိုက်နာခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်) သည်အခြားမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ဗီဇတွေကခိုင်မာတယ်၊ ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုင်တွယ်သူလိုအပ်တယ် လေ့ကျင့်ရေး၏ဤအမျိုးအစားသည် ။
The Border Collie Australian Shepherd ရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည် အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူသားမြားဆီသို့ ဦး တည်ဖော်ရွေခွေး အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မိသားစုမှကြီးစွာသောထို့အပြင်စေနိုင်သည်။
သဘာဝကျကျထိန်းကျောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဤခွေးသည်ကြက်များသို့မဟုတ်လူအုပ်စုတစ်စုပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုများကိုလှည့်ပတ်ရန်အားကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုရှိသည်။
သူတို့မွေးမြူထားသည့်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအားမည်သည့်အခါမျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာစေရန်ဘယ်တော့မှမသိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ခိုင်မာသောလုပ်ငန်းခွင်မှ Border Collie Australian Shepherd ရောနှောမှုများကြောင့်သားကောင်များတိုးပွားလာနိုင်သည်။
ဒီကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ် စနစ်တကျ socialized လျှင် , သူတို့ကခွေးပေါက်စအခါကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့, သူတို့ကိုမှန်ကန်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအပြုအမူသင်ပေး။
အလယ်အလတ်အရွယ်ခွဲစိတ်မှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး ၏ပျမ်းမျှအရွယ်အစားကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
ထိုကဲ့သို့သောလိင်, မိဘများ၏အရွယ်အစားနှင့်အဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်များအများအပြားရှိပါတယ် မျိုးရိုးဗီဇအမွေဆက်ခံခြင်း ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Border Collie Australian Shepherd Mix အရွယ်အစားသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက် ၃၀ မှ ၅၀ ပေါင်နှင့်အထီးအတွက် ၃၅ မှ ၆၅ ပေါင်အထိရှိသည်။
အမျိုးသမီးများသည် ၁၈ မှ ၂၁ လက်မအထိကြီးထွားနိုင်သည်။ ယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့် ၁၉-၂၃ လက်မခန့်တွင်အနည်းငယ်ကြီးသည်။
သူတို့က တစ်ကြွက်သားခွေး သူတို့ရဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ကြောင့်။
အမြင်အာရုံအရ Border Collie Australian Shepherd Mix သည်အလယ်အလတ်အရွယ်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်ခြေထောက်၊ ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်များ၌အမွေးများပါဝင်သောအလယ်အလတ်အရွယ်ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သူတို့မှာ mesocephalic head ရှိပြီး floppy နားရွက်ရှိပြီးမျက်လုံးဟာအညိုရောင်ဒါမှမဟုတ်အပြာရောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Australian Shepherd နှင့် Border Collie နှစ်ခုလုံးတွင်အင်္ကျီအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် Border Collie Australian Shepherd Mix ခွေးပေါက်စများ၏အရောင်များကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဒီအလုပ်အတွက် slicker brush သည်သင့်တော်သော undercoat အတွင်းရှိဆံပင်ချောင်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သူတို့ကတစ် ဦး လိုအပ်နိုင်ပါသည် လအနည်းငယ်တိုင်းသတို့သားအပြည့်အဝ သူတို့၏ undercoat များသည်ဆံပင်ချွတ်ခြင်းနှင့်နွေရာသီတွင်အေးစေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သွားတိုက်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်သည်ခွေး၏အစာအာဟာရနှင့်သွားတို့၏အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကျောက်ချဉ်ထည်များပြားလာခြင်းနှင့်အတူအခြေအနေမကောင်းပါကနေ့စဉ်သန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ခွေးကိုခြောက်သွေ့သော kibble ဖြင့်ကျွေးပါကခွေးသွားဝါးများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနေ့စဉ်သန့်စင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကစားနည်းကိုပျင်းစရာမဖြစ်စေနိုင်အောင်လှုပ်ရှားမှုအသစ်များနှင့် ဦး နှောက်ဂိမ်းများကိုတစ်သမတ်တည်းတက်အောင်တွန်းအားပေးမှုများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။
လမ်းညွှန် ၁၁၀၀ ကယ်လိုရီ
တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ကျွေးသောခြောက်သွေ့သော kibble သည် Border Collie Australian Shepherd Mix အတွက်ကောင်းမွန်သောအစားအစာဖြစ်သည်။
သို့သော်အလုပ်လုပ်သော Border Aussie သည်အစားအစာလိုအပ်သည် အရာပရိုတိန်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည် သူတို့ကိုနွားမွေးမြူရေးအတွက်သူတို့လိုအပ်သောစွမ်းအင်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်။
အလုပ်လုပ်သောခွေးများသည်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၁၄၀၀ ၀ န်းကျင်လိုအပ်သည်။
စိုစွတ်သောအစာသည်အလုပ်လုပ်သည့်ခွေးများ (ပရိုတင်းထပ်ထည့်သောကြောင့်) အတွက်ပိုမိုသင့်လျော်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိုစွတ်သောအစာနှင့်ဆက်စပ်သောအဆီပိုများသည်ခြောက်သွေ့သော kibble သည်အလုပ်မလုပ်သောခွေးများအတွက် ပို၍ သင့်လျော်သည်။
မိနစ်များ မိနစ် ၉၀
ဒီခွေးအမျိုးအစားအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်နေ့လျှင်မိနစ် 90 ခန့်ကြာရှည်သင့်ပါတယ်။
သင်ဤလမ်းအတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ နေရာအသစ်များသို့မဟုတ်ရနံ့ရနံ့များကိုရှာဖွေခြင်းတို့ပါဝင်သင့်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျက်စားရာမှာအကြီး , Border Collie Australian Shepherd Mix သည်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောနေရာများတွင်သူတို့လိုချင်သောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်လေ့ကျင့်ရန်အကောင်းဆုံးသင့်တော်လိမ့်မည်။
ဒီရောနှောခြင်း၏ trainability အလွန်မြင့်မားသောဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်းယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသည်နှင့်ဒါချွတ် leash လေ့ကျင့်ခန်းသူတို့ကိုဖွင့်ကရင်ဆိုင်ရပါစေအဖြစ်ရေနွေးငွေ့ကိုချွတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဤဖောက်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည် - ကျွန်တော်တက်စောင့်ရှောက်ဘယ်တော့မှ!
သူတို့သည်အလွန်မြန်သောသင်ယူသူများဖြစ်သဖြင့်အပြုအမူအသစ်ကိုသင်ယူရန်များသောအားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကအသံအမိန့်မှထိရောက်စွာသင်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ်လက်အချက်ပြမှုများ - ဘယ်ဟာကိုကြိုက်သလဲ
Border Collie Australian Shepherd Mix သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့်ပဟေlesိများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အမြဲတစေရှာဖွေနေသည်။
ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ခွေးလေ့လာသင်ယူရန်လှည့်ကွက်အသစ်များကိုမှန်မှန်တီထွင်ရန်၊ ရှာဖွေရန်နှင့်ဖန်တီးရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်၊ စူးစမ်းရန်နေရာအသစ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများစွာပေးမည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်။ ဒီအသိဉာဏ်ခွေးဖောက်သည် ။
Collie မျက်လုံး Anomaly သည် Border Collies နှင့်အခြားသိုးထိန်းကောင်များကိုထိခိုက်သည့်မျိုးရိုးလိုက်မျက်စိရောဂါဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မျက်စိ၏မလျော်ကန်သောဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးမျက်စိကွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ၊ မရှိရှင်းလင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Border Collie ၏ Australian Shepherd Mix ၏ Border Collie မိဘကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။
နားပင်းခြင်းကိုနယ်စပ်ဒေသတွင်လည်းတွေ့ရလေ့ရှိပြီးထို့ကြောင့်ဤအရောအနှောအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု နားပင်းခြင်းနှင့် Merle ကုတ်အင်္ကျီအရောင်အကြား link ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်နားပင်းခြင်းအတွက်ကုသမှုမရှိသောကြောင့်ခွေးသည်လူလတ်ပိုင်းအရွယ် (၄ နှစ်အရွယ်) တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
Hip dysplasia သည်Sheစတြေးလျ Shepherds နှင့် Border Collies နှစ်ခုစလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး hip socket ၏ပုံပျက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်နာကျင်အဆစ်နှင့်ခြေဆွံ့ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်, ကုသမှုမရှိသော်လည်း၎င်းကိုနာကျင်စေသောဆေးများနှင့်ရေကုထုံးဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
Border Collie Australian Shepherd Mix သည်အလယ်အလတ်တန်းစားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။
The Border Aussie သည်မေးမြန်းလိုစိတ်ပြင်းပြသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုနှစ်သက်သည်မှာအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်သူတို့၏ပိုင်ရှင်နှင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
The Border Collie Australian Shepherd Mix သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်လူကြိုက်များလာပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မြှင့်တင်ရန်လိုသည့်အရာရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
အဆိုပါ Lab Malamute ရောနှော: ဒီမွေးမြူရေးဒီတော့အထူးစေသည်ဘာလဲ
husky နှင့် pomeranian ရောစပ်ထားသောခွေးများ
border collie သည်သြစတေးလျသိုးထိန်းနှင့်ရောနှောသည်
နယ်စပ် collie ဂျာမန်သိုးထိန်းရောစပ်ခွေးကလေး
teacup chihuahua ၏ပုံတစ်ပုံ
chihuahua သည် pitbull နှင့်ရောသည်